Aleix Vidal oo loo sheegay inuu bishaan ka tago kooxda Barcelona | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Aleix Vidal oo loo sheegay inuu bishaan ka tago kooxda Barcelona
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la soo warinayaa inay u sheegtay xiddigeeda Aleix Vidal inuu isaga tago kooxda inta lagu guda jiro bishaan Janaayo oo uu furan yahay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Vidal ayaa ku qarash gareeyey labo xilli ciyaareed iyo bar garoonka Camp Nou tan iyo markii kaga soo biray naadiga Sevilla, laakiin 28-sano jirkaan ayaan fursad boos joogto ah ka helin safka koowaad ee kooxda Catalan.
Ciyaaryahanka ayaa dhaliyay afar gool 42 kulan oo uu u saftay tartammada oo dhan kooxda, laakiin 14 kulan oo horyaalka La Liga ah ayuu ku soo bilowday.
Sida ay warinayso Mundo Deportivo, Tababare Ernesto Valverde ayaa ku wargeliyey Vidal inuu ka tagi karo kooxda ka hor inta aysan dhammaanin bishaan, isagoo ciyaaray kaliya 411 daqiiqo kubada cagta ee horyaalka Spain iyo Champions League xilli ciyaareedkan.
Vidal ayaa ku laaban kara kooxdiisii hore ee Sevilla, halkaasoo uu ku saftay 46 kulan intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkii 2014-15.